प्रगतिशील साहित्यमा युवा प्रयास
केही नेपाली साहित्यकारहरु
Sahitya Suskera "साहित्य सुस्केरा "
संघिय गणतन्त्र नेपाल, Nepal
साथ दिनेहरु (Followers)
अनाम पुस्तकालयबाट सन्चालित 'नेपाली भाषाका ब्लगहरु' हेर्नको लागि यहाँ थिच्नुहोस ।
नयाँ बन्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ
बादल फाटेको छैन, झरी परेको पनि हैन, घाम निदाइरहेछ कतै बादलकै खोकिलामा, जुन लुकिरहेछ आकाशको कतै एकान्तमा, शितल बतास खै कसरी अपहरण भयो यो वस्तीबाट; शोषण, उत्पीडन र अपमानको उकुसमुकुस, छटपटी, आक्रोस, पिडा र व्यथाको बिच बाँचिरहेछ धर्ती; धर्तीको एक प्यारो टुक्रा यो देश र प्यारो देशका मनिसहरु खोजिरहेछ नयाँ चिज, नयाँ द्रिश्य, नयाँ कदम ।
मनिसहरु भन्छन केही मनिसहरु भन्छन "सब चिज पुरानै छ ।" ती मनिसहरु सब चिज पुरानै छ भन्ने थाकेको सुस्केरा घट्घट पिएर आँफैभित्र लत्रिएर, निख्रिएर लमतन्न बगरमा चिसो मुढाझैं लत्रिन्छन, लत्रिरहेछन र निदाएरै बोलिरहेछन "सब चिज पुरानै छ ।" तर हामी भन्छौँ "होइन सन चिज पुरानै छैन, हेर चारैतिर हेर चिसा मुढाहरु पनि सल्किरहेछन, फेरी राँको सल्किन थालेको छ चिसो हिमालमुनी, वर्ग संघर्षका झिल्काहरु, असरल्लै लाम लाग्न थालेका छन वस्तीहरुमा, र वस्तीहरुमा आँखाका चिप्राहरु पुस्दै सल्बलाउन थालेका छन मनिसहरु, नयाँ नयाँ मनिसहरु ।" हामी भन्छौँ धर्ती-आकाश थर्काएर भन्छौँ "मरेका मनिसले जिउँदाहरुको नाडी छाम्न सक्दैन; निदाएको मनिसले उठेको वस्ती देख्न सक्दैन; जिउँदाहरुलाई छाम्न आँफै जिउँदो बन्ने आँट गर्नुपर्छ; बिउँझिएकाहरुको लाममा उभिन आँफै निद्रालाई गल्हत्याउने साहस गर्नुपर्छ; नयाँ भबिष्यलाई स्वागत गर्न आँफै अलिकती नयाँ बन्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।"
केही साहित्यिक साइटहरु
नेपालीकविता डट कम
बालसंसार डट कम
दोस्रो शृङ्‍खलाका झलकहरु
प्रथम शृङ्‍खलाका झलकहरु
साहित्य सुस्केरा अपडेट
Posted by Sahitya Suskera "साहित्य सुस्केरा " at 2:16:00 PM0comments
Labels: अग्रजको कलम
आमाले जिन्दगीमा कहिल्यै पनि ऐना हेर्न पाउनुभएको थिएन । ऐनामा आफ्नो प्रतिविम्ब कस्तो देखिन्छ ? उहाँलाई केही पनि थाहा थिएन सायद । जिन्दगीको लामो हिस्सा उहाँले ऐना नहेरेरै बिताउनुभयो ।
ऐनाको आवश्यकता उहाँले कुवामा जमेको पानी, पोखरीको पानी वा त्यस्तैत्यस्तै जलविम्बहरुमा हेरेर पूरा गर्नुभयो ।
उहाँ आफ्नो अनुहार हेर्नुपर्यो भने तिनै स्थलहरुको चयन गर्नुहुन्थ्यो । एकदिन उहाले साच्चै नै ऐना हेर्न पाउनुभयो । त्यतिखेर उहा बुढ्यौलीका दिनहरु नाप्दै हुनुहुन्थ्यो । ऐनामा आफ्नो अनुहार हेरिसकेपछि उहाँले चाउरी परिसकेको आफ्नो गाला मुसार्दै यतिमात्रै प्रतिक्रिया दिनुभयो, म जवान छँदा यो ऐनामा हेरेकी भए कस्ती देखिन्थे हुँला ?
उहाँ भावुक बन्नुभयो । हामी पनि भावुक भयौं ।
Posted by Sahitya Suskera "साहित्य सुस्केरा " at 6:35:00 PM0comments
हात्तीजस्ता मेरा बा
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका पुत्र प्रा.डा. पद्मप्रसाद नेपाली समालोचनामा महाकविका कृतिहरूको राम्रो अध्ययन नै नगरिएको दाबी गर्छन् । उनी देवकोटाका छोरा मात्रै होइनन्, नेपाली साहित्यको अध्येता र अंग्रेजी साहित्यको प्राध्यापकसमेत हुन् । उनी देवकोटा अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष पनि छन् । देवकोटाकृत साहित्यको कम अध्ययन भएको निष्कर्षमा पुग्न पुत्र देवकोटासँग केही तर्क र तथ्य छन् । यसपटक साहित्यिक कोणबाट उनले आफ्ना पिताको स्मरण गरेका छन् । प्रस्तुत छ, महाकविकै शतवाषिर्कीको अवसरमा पिता देवकोटामाथि पुत्र देवकोटाको साहित्यिक दृष्टिःलक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको छोरा भएर भन्दा पनि उहाँका कृतिको पाठक र साहित्यको विद्यार्थीका नाताले कहिलेकाहीँ म उहाँको योगदानबारेमा घोत्लिने गर्छु । नेपाली साहित्यमा उहाँले जे-जति योगदान दिनुभएको छ, त्यसको समग्र अध्ययन पुगेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
भन्नलाई मात्रै उहाँलाई महाकवि-महाकवि भनिन्छ । त्यसो भनेर मात्रै त न उहाँका सिर्जनाको अध्ययन हुन्छ, न उहाँको योगदानको सम्मान हुन्छ । उहाँलाई गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने महाकवि भनिराख्नुपर्दैन, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा मात्रै भने पुग्छ । उहाँको व्यक्तित्व कविको मात्रै हो कि जस्तो चर्चा पनि गरिन्छ । उहाँको व्यक्तित्वका विभिन्न आयामलाई हामीले बिर्सिराखेका छौँ । खै, उहाँको कथाकार व्यक्तित्वको बारेमा अध्ययन ? खै, उहाँका नाटकहरूको अध्ययन ? हुन त समयमै कथा/नाटक आदिका संकलनको प्रकाशन नभएकाले पनि उहाँका राम्रा-राम्रा कथा/नाटकको गहिरो अध्ययन नभएको होला । तर, पछि उहाँको बारेमा अध्ययन गर्नेले त यस विषयमा खोजी गर्नुपर्ने हो ! हाम्रा कतिपय विश्वविद्यालयमा देवकोटाको समग्र अध्ययन गर्ने व्यवस्था छैन ।
नेपाली साहित्यको आधुनिकता कसको नेतृत्वमा स्थापित भयो ? मेरो बुझाइमा नेपाली साहित्यको आधुनिकता देवकोटाको आधुनिकताभित्र परिभाषित हुनु आवश्यक छ । नेपाली साहित्यको आधुनिकतामा देवकोटा खोज्ने होइन, देवकोटाको आधुनिकताभित्र नेपाली साहित्य कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने हुन्छ । मैले त नेपाली साहित्यमा नै सम्पूर्ण रूपमा सिंगो देवकोटा मात्रै देखेको छु । यो मेरो अन्धता पनि हुनसक्छ । तर, महाकविको योगदानबारे जे-जति अध्ययन हुनुपर्ने हो, त्यो पनि भएको छैन ।
नेपाली साहित्यमा समालोचनाको सुरुदेखिकै प्रवृत्ति महानतामा जोड दिने प्रवृत्ति हो । देवकोटालाई पनि प्रायः नेपाली समालोचकले उहाँको महानताबाट प्रभावित भएर श्रद्धापूर्वक हेरे । उहाँको व्यक्तित्व नै कति प्रभावशाली थियो भने त्यसैको उकुसमुकुसले उहाँप्रति सम्मान र श्रद्धा प्रकट गरियो । श्रद्धा गरिनु नराम्रो कुरा त होइन । तर, समालोचना भनेको श्रद्धा मात्रै होइन । समालोचना समालोचकको आफ्नो दृष्टिकोणअनुसारको अभिव्यक्ति वा प्रतिक्रिया मात्रै हो । समालोचना सबैले एउटै कोणबाट एउटै सिद्धान्तअनुसार गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । मोदनाथ प्रश्रतिले माक्र्सवादी दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भन्दैमा त्यो गलत वा अर्को कसैले अर्को कुनै सिद्धान्तका आधारमा हेर्‍यो भन्दैमा त्यो सही भन्ने हुँदैन । अनगिन्ती दृष्टिकोण हुन्छन्, तिनले अध्ययन गर्दै जान्छन् । टिप्पणी-प्रतिटिप्पणी हुन्छ । यो त निरन्तरको प्रक्रिया हो ।
समालोचकहरूले कसैले देवकोटालाई प्रगतिवादी, कसैले स्वच्छन्दतावादी, कसैले स्वच्छन्दतावादी-प्रगतिवादी, कसैले माक्र्सवादी भनेर दाबी गर्छन् । मलाई पनि कहिलेकाहीँ सोधिन्छ- देवकोटा के वादी हुन् ? यथार्थमा देवकोटा नेपाली साहित्यको त्यस्तो हात्ती रहेछन्, कसैले पुच्छर छाम्छन् र लौरीजस्तो भन्छन् । कसैले खुट्टा छाम्छन् र खम्बाजस्तो भन्छन् । कसैले जिउ छाम्छन् र भित्ताजस्तो भन्छन् । आखिरमा देवकोटा सग्लो हात्ती हुन्, जसलाई सम्पूर्ण रूपमा कसैले पनि भेउ पाउन सकेका छैनन् । सबै आँखा खोलेर देवकोटाका सबै आयामको अध्ययन भएपछि नै वास्तविक देवकोटालाई दुनियाँले चिन्नेछ । म देवकोटाको छोरो भएकाले बालाई हात्तीजस्तो देखेको होइन, साहित्यको सामान्य विद्यार्थी र देवकोटाको साहित्यको पाठक भएको नाताले भनिरहेछु ।
देवकोटाको योगदानलाई नेपाल सरकारले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । सरकारभन्दा पनि जनताले उहाँलाई बढी सम्मान गरेका छन् । सरकारले गर्न सक्ने कतिपय काम पनि गर्नै भ्याएको छैन । साधारणभन्दा साधारण देवकोटाका कृतिको प्रकाशन/प्रवर्द्धन गर्न सक्थ्यो सरकारले, त्यो पनि गर्दैन । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न दूतावासमा देवकोटाका कृतिका अनुवाद गरेर बाँड्न सकिन्थ्यो । विश्वविद्यालयमा कोष स्थापना गर्न सकिन्थ्यो । अहिले हामी दक्षिण एसियाली साहित्य पनि विश्वविद्यालयमा पढाउँदै छौँ । त्यो साहित्यको पाठ्यक्रममा पनि देवकोटाका कृति राख्न सरकारले पहल गर्न सक्छ । दक्षिण एसियाली साहित्यमा देवकोटाको स्थान कहाँ छ ? दक्षिण एसियाको परिभाषामा कति क्षेत्र पर्ने हो ? यस्ता कुरामा सरकारको ध्यान जानुपर्ने हो । दक्षिण एसियाको साहित्यको परिभाषा हामीले नै गर्ने हो भने त हामी देवकोटाबाटै सुरु गछौर्ं । तर, सरकारले यस्ता गम्भीर विषयमा पनि खासै महत्त्व दिएको देखिन्न । नेपाली साहित्यमा देवकोटाको योगदान जति छ, त्यसबारे सरकारको चासोचाहिँ शून्यजस्तो देखिन्छ ।
अघिल्लो वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले देवकोटाकै कवितांश 'उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक' उद्धृत गर्नुभएको थियो । सोही बजेटमा देवकोटाको शतवाषिर्की मनाउनका लागि भनेर सरकारले २५ लाख रकम पनि छुट्टयायो । त्यो अलिकति भए पनि नेपाली साहित्य र देवकोटाको योगदानप्रतिको सरकारको सचेतता हो । तर, त्यसका लागि पनि हामीले अझ अघिल्लो अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतकै पालामा ठूलो प्रयत्न गरेका थियौँ । हामीले महाकवि देवकोटा अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रको तर्फबाट योजना बनाएर सरकारसँग २८ लाख रुपैयाँ मागेका हौँ । पछि त्यो रकम धेरै संस्थालाई शतवाषिर्की मनाउन बाँडियो, देवकोटा केन्द्रलाई जम्मा ११ लाख प्राप्त भएको थियो । त्यसअन्तर्गतको पाँच लाखको हामीले विद्वतवृत्ति स्थापना गरेका छौँ । वर्षैभरिको शतवाषिर्की कार्यक्रमका लागि पनि हामीले छुट्टै योजना बनाएर काम पनि गरिरहेका छौँ । देशका अरू विभिन्न संघ/संस्थाले पनि अघिल्लो सालको कात्तिक २७ देखि यो वर्षको कात्तिक २७ सम्म विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइरहेका छन् । मलाई त देवकोटाको जन्म नोभेम्बर १२ तारिखमा गर्नु उपयुक्त लाग्थ्यो । किनभने देवकोटालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्‍याउनका लागि त्यो मिति नै सही हो । हामी देवकोटा र उनको साहित्यिक कृतिलाई विदेशसम्म पनि पुर्‍याउन चाहन्छौँ ।
देवकोटाका बारेमा जानकारी राख्न चाहने र देवकोटा अध्ययन केन्द्रको गतिविधिबारे चासो राख्ने सबैका लागि सजिलो होस् भनेर अध्ययन केन्द्रले आफ्नो छुट्टै वेबसाइट पनि चलाइरहेको छ । त्यो वेबसाइट अंग्रेजीमा छ-डब्ल्युडब्ल्युडब्ल्युडटडिएसआरसिडटओआरजिडटएनपी । 'देवकोटा अध्ययन' भन्ने पत्रिकामार्फत पनि हामीले देवकोटाका कृति र योगदानलाई दुनियाँसामु पुर्‍याइरहेका छौँ । हामीत सामान्य खुडि्कला चढ्दै छौँ । हाम्रो कामलाई सरकारले पनि हेर्नुपर्ने हो । देवकोटाका कृतिको अनुवाद मात्रै गरेर पुग्दैन, त्यसको चर्चा पनि हुनुपर्छ । कृतिको अमरता पनि चर्चा र चासो भएका कृतिको मात्रै गरिने चलन छ ।
इंग्ल्यान्डमा सेक्सपियरको 'जुलियस सिजर' लगायतका नाटक स्कुलका बच्चाहरूको पाठ्यक्रममा राखिएको छ । हामीकहाँ स्कुलतहमा देवकोटाको 'मुनामदन' राख्न मानिन्न । स्कुल तहमै 'मुनामदन' विद्यार्थीले बुझ्छन् र ? भनिन्छ । तर, हामीकहाँ बुझ्न गाह्रो विद्यार्थीलाई होइन, शिक्षकलाई भइरहेको छ । एसएलसी तहमा 'मुनामदन' पूरै कृति राखेर पढाउन सकिन्थ्यो । भन्नेवेला 'मुनामदन' यति सरल, यति मीठो, सबैले बुझ्ने भनिन्छ । तर, पाठ्यक्रममा राख्न अहिले पनि कन्जुस्याइँ गरिएको छ ।
Posted by Sahitya Suskera "साहित्य सुस्केरा " at 5:46:00 PM0comments
Labels: देवकोटा शतवार्षिकी-२०६६
देवकोटा शतवार्षिकी-२०६६ मा सहभागी हुनुहोस् र देवकोटा अनि उनका साहित्यबारे आफ्नो अभिव्यक्ती दिनुहोस् ।
Posted by Sahitya Suskera "साहित्य सुस्केरा " at 7:13:00 PM0comments
(साभार: घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे)
Posted by Sahitya Suskera "साहित्य सुस्केरा " at 11:45:00 AM0comments
- ईश्वर थोकर
शिरीषझैं निमेषमै झर्न हुन्न मान्छे,
नझर्दा नि सम्झ ज्यूँदै मर्न हुन्न मान्छे ।
भुमरीको मृगतृष्णा अनायस खोज्दै
लुकिचोरी मरुभूमि चर्न हुन्न मान्छे ।
जिन्दगीका आशाबिम्ब सयौं लाखौं तर,
आफैंदेखि भने पर सर्न हुन्न मान्छे ।
आज यहाँ भोलि कहाँ परन्तु छ जहाँ,
अत्तालिने आँट त्यहाँ गर्न हुन्न मान्छे ।
Posted by Sahitya Suskera "साहित्य सुस्केरा " at 11:41:00 AM0comments
देशको तापले पग्लियो हिमाल, हामी झै रोएर
सकिन्न कहिले युद्धको पिडा, आसुले धोएर
मार्नु र मर्नुले बन्दैन देश, बुझ है नेपाली
मार्नु र मर्नु त्यागेर भनौ, हामी हौ नेपाली।
आमालाई रुवाई यो भुमी रङाई नगरौ है हत्या
आफ्नो देश आफै आगोले सल्काई नदेखाउ बिरता
मतभेद त्यागी बैरिभाव छोडी बनाउ है नेपाल
बिरता देखाई नहसाउ सत्रु दाजु-भाई लडेर
हिमाल झै अग्लो अटल बिश्वास मेटिन्न मेटेर
चम्किलो सुर्य हातले कहिले छेकिन्न छेकेर
Posted by Sahitya Suskera "साहित्य सुस्केरा " at 6:27:00 PM 1 comments
- कोइराला सूर्यकिरण
गलाले दिए पो म त्यो गीत गाऊँ
उनी छिन् त्यसैमा कसोरी म पाऊँ
ति आशा गडेका परेलीहरुको
मायाँवी शहरमा कसोरी हराऊँ ?
सुसाउँदै गरेका यि मनका हजारौं
तरेलीहरुमा कसोरी सजाऊँ ?
र, आशा छरेको छु पानाहरुमा
ल...! आऊ ! सुनाैलो छहारी लगाऊँ
ति तारा र जुनको तुलामा छ क्वैली
उ बस्ने शहरको प्रहरमा हराऊँ
Posted by Sahitya Suskera "साहित्य सुस्केरा " at 5:26:00 PM0comments
कहाँ छ राष्ट्रियता ?!
हामी राष्ट्रमा छौँ
र भोकै मर्छौँ
हाम्रा भोकहरु बन्दकी राखेर
उसले राष्ट्रियता डकार्छ
डकार्नुमा छ कि
भोकमा छ !
२०६६ साउन १९
Posted by Sahitya Suskera "साहित्य सुस्केरा " at 4:15:00 PM3comments
– रमेश भट्टराई
धुमिल बन्दै गइरहेका थिए
रङ्गीन विपनाका माझ
एउटा धुमिल सपनाजस्तो
केही श्यामस्वेत विज्ञापनहरू आउँछन्
Posted by Sahitya Suskera "साहित्य सुस्केरा " at 8:50:00 AM0comments
सीमाना हराएको देश
महाकाली लुटियो सन्धिमा
मेरो देशको राष्ट्रियता
वीर गोर्खालीको देशमा माटो हराईरहेछ
सन्धि र सम्झौता नबुझ्ने पशु नेताहरुले
राष्ट्र र रास्ट्रियतामाथि खेलबाड गरेकोछ
पूर्वमा गएर पश्चिमको विकास, रोजगारी
पश्चिममा गएर पुर्बको बिकास सुनाएको छ
जनतालाई झुकाउनसम्म- झुकाएको छ।
मातृभुमीको माया नगरेको हैन नेपालीहरुले पनि
कहिले नया दिल्ली...... कहिले काठमाडौं........
देशको नक्सा फेर्दैछ, नँया डोबमा पुरानो किल्ला
मातृभुमी रोएकोछ, स्वयम्भूको आँखा रसाएको छ
ढुङा गुडाएर, घुएत्रो हानेर जोगाएको देशको सिमाना
पैसा र बैसामा रास्ट्र नेताहरुले माटो र पानी बेचेको छ
योद्धाहरुको रगतले कोरेको रेखा र देशको अस्तित्व
मान्छेको रुपमा यि ब्वासाहरुले बेचेकोछ, मेटेकोछ
५ तरे होतेलमा हुस्की र इस्कुवाचमा रमाएकाछन, नाचेका छन्
रास्ट्रको सिमाना हराएको खुसीमा
देशको माटो बेचेको खुसीमा।
Posted by Sahitya Suskera "साहित्य सुस्केरा " at 8:28:00 AM0comments
पाउलिंदा पालुवा शिशीर गयो र खै ?!
फूल फुल्दैमा वसन्त कहाँ आयो र खै ?!
रोप्नलाई त रोपेकै थियो वीजहरु
आँकुराएपनि पात कति हाल्यो र खै ?!
वतासलाई हुरी बनाएर ल्याएकै हो
कसिङ्गरहरु कुन्लाई उडायो र खै ?!
रातलाई चिरेर सुनौलो रङ्गहरु छर्दै
घाम उदाएपनि विहान भयो र खै ?!
फाटेका मनहरु सिलाउँछौ रे नि हो ?
सिलाउन सङ्गै सियो लिइ आयो र खै ?!
Posted by Sahitya Suskera "साहित्य सुस्केरा " at 10:53:00 AM0comments
कुहिएका फलहरु झार्न सक्नुपर्छ
नयाँ नयाँ विरुवाहरु सार्न सक्नुपर्छ
आँखाहरुले उज्यालोको खोजी गर्दै गर्दा
जोगाउन विरुवालाई बार्न सक्नुपर्छ
आतुर छन् खुट्टाहरु अघी बढ्नलाई
सबै हिंड्ने बाटोहरु खार्न सक्नुपर्छ
सबैले नै भनिराछन् नयाँको हो पालो
बांगालाई जनजालमा पार्न सक्नुपर्छ
बनाउने कुरा हैन आफ्नै दुनो सोझो
राष्ट्रघातीहरुलाई मर्न सक्नुपर्छ ।
Posted by Sahitya Suskera "साहित्य सुस्केरा " at 2:06:00 PM0comments
छिटै देउ, देशलाई गती
Posted by Sahitya Suskera "साहित्य सुस्केरा " at 1:36:00 PM0comments
Posted by Sahitya Suskera "साहित्य सुस्केरा " at 9:22:00 AM 1 comments
थाके पनि गोडाहरु
खानु परे ता पनि हण्डरहरु
झर्नै परे पनि प्रत्यक चाढाइमा
ओर्लनै परे पनि प्रत्यक उक्लाइमा
म देख्न छाड्दिन उज्याला सपनाहरु
(साहित्य सुस्केराको आठौँ शृङ्‍खलामा वाचित)
Posted by Sahitya Suskera "साहित्य सुस्केरा " at 3:47:00 PM0comments
Labels: कविता, शृङ्‍खलामा वाचित
यो शहर फिर्दै आएँ
गाउँघर चिर्दै आएँ
सपना छ थाप्लोभरी
र त नाम्लो भिर्दै आएँ
गाँस, बास, कपासले
मात्र यहाँ पिर्दै आएँ
गावैँ थियो प्यारो तर
वाध्यताले गिर्दै आएँ
Posted by Sahitya Suskera "साहित्य सुस्केरा " at 3:27:00 PM0comments
Labels: गजल, शृङ्‍खलामा वाचित
ए जून !
मेरो जस्तै ए जून !
झुटो हो तिम्रो हाँसो पनि
भित्र–भित्र रोएर पनि
बाहिरबाट हाँस्ने बानीमा
हामी दुईटाको कहानीमा
कि तिमी रून्छौ
र तिम्रो आँसु शीत बन्छ
र मेरो आँसु गीत बन्छ ।
घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छेबाट
सभार: अनाम पुस्तकालय
Posted by Sahitya Suskera "साहित्य सुस्केरा " at 6:17:00 PM0comments
Labels: अग्रजको कलम, कविता
मलाई धेरै रहर थियो
सगरमाथासंग प्रेम गर्ने -
धेरै समुद्रहरु छिचोलेर -
कस्तो दुर्भाग्य !
अस्ती भर्खर फेरी -
सन्देश पठाएको रहेछ -
मलाई पर्खदा पर्खदै
उ सेतै फुलिसक्यो रे ।
*दक्षिण कोरियाको सबैभन्दा उचाइ भएको पहाड
Posted by Sahitya Suskera "साहित्य सुस्केरा " at 5:47:00 PM0comments
मलाई जीवन पनि मन पर्छ
मलाई मृत्यु पनि मन पर्छ
मृत्यु छ र त जीवन छ
जीवन छ र त मृत्यु छ
तर म दुबैका विरुद्ध लड्छु
जीवन सुन्दर बनाउन
मृत्यु सुन्दर बनाउन
म दुबैका विरुद्ध लड्छु
र अविराम युद्ध लड्छु
Posted by Sahitya Suskera "साहित्य सुस्केरा " at 11:26:00 AM2comments